Su'aalaha Kheyraadka Aadanaha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dhismooyinka iyo Dhulka Shaqaalaha
Shaqalaha Waxbarashada Beesha Minnetonka
Shaqaalaha Adeegyada Nafaqada
Kayd ama Beddel xirfadle ama Macallin
Darawal Baska Dugsiga
Waaxda Tech ama Nidaamyada Macluumaadka Shaqaalaha
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa maamulayaashayada shaqaalaynta iyo xiriirka shaqaalaha. Iyadu sidoo kale waa qofka koowaad ee lagala xiriiro shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Haddii aad qabtid su'aalo ama walaac ku saabsan xaaladaha shaqada ama xaaladaha shaqada, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad marka hore la hadasho agaasimahaaga fulinta ama kaaliyaha kormeeraha guud. Tabashooyinka badankood waxaa xallin kara shaqaalaha ugu dhow dhibaatada. Haddii dhibaatadu sii socoto, la xiriir Robyn Klinker oo ka tirsan Shaqaalaha.
Su'aalaha Mushaharka - kala xiriir Ashley Handahl taleefanka (952) 401-5026 ama emayl ugu dir ashley.handahl@minnetonkaschools.org .
Su'aalaha Caymiska - kala xiriir Jodi Blais taleefanka (952) 401-5021 ama emayl u dir jodi.blais@minnetonkaschools.org .
Cabashooyinka Xuquuqda Aadanaha - kala xiriir Dr. Michael Cyrus taleefanka (952) 401-5015 ama emayl ugu dir michael.cyrus@minnetonkaschools.org .
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa maareeyayaashayada, iyo xirfadleyaasha takhasuska leh shaqaaleynta, maqnaanshaha dheeraadka ah iyo xiriirka shaqaalaha. Iyadu sidoo kale waa qofka koowaad ee lagala xiriiro shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Haddii aad qabtid su'aalo ama walaac ku saabsan xaaladaha shaqada ama xaaladaha shaqada, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad marka hore la hadasho kormeerahaaga. Tabashooyinka badankood waxaa xallin kara shaqaalaha ugu dhow dhibaatada. Haddii dhibaatadu sii socoto, la xiriir kormeeraha Tim Rosland, Dhismooyinka iyo Dhulka; Jim McCann, Isuduwaha Caafimaadka iyo Badbaadada ; ama Robyn Klinker oo ka tirsan Shaqaalaha.
Ted Schultz , Agaasimaha Waxqabadyada Ardayda, 952-401-5901 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee la xiriira tababarka.
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa Waxbarshada Beesha Minnetonka shaqaalaynta, maqnaanshaha muddada dheer iyo xiriirka shaqaalaha. Iyadu sidoo kale waa xiriiriyaha koowaad ee maamulka qandaraaska, shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Haddii aad qabtid su'aalo ama walaac ku saabsan xaaladaha shaqada ama xaaladaha shaqada, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad marka hore la hadasho kormeerahaaga. Tabashooyinka badankood waxaa xallin kara shaqaalaha ugu dhow dhibaatada. Haddii dhibaatadu sii socoto, la xiriir Robyn Klinker oo ka tirsan Shaqaalaha.
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa Waaxdayada Adeegyada Nafaqada shaqaaleynta, maqnaanshaha muddada dheer iyo xiriirka shaqaalaha. Iyadu sidoo kale waa xiriiriyaha koowaad ee maamulka qandaraaska, shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Haddii aad qabtid su'aalo ama walaac ku saabsan xaaladaha shaqada ama xaaladaha shaqada, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad marka hore la hadasho maamulahaaga. Tabashooyinka badankood waxaa xallin kara shaqaalaha ugu dhow dhibaatada. Haddii dhibaatadu sii socoto, la xiriir Jane Bender , Kormeeraha Adeegyada Nafaqada iyo / ama Robyn Klinker ee Shaqaalaha.
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa maamulayaashayada iyo kalkaaliyayaasha xafiiska shaqaalaynta, maqnaanshaha dheer iyo xiriirka shaqaalaha. Waxay sidoo kale tahay qofka koowaad ee lagala xiriiro xafiiska qandaraaska xafiiska / wadaadka, shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa maamulayaashayada iskuulka iyo xirfadleyaasha shaqo qorista, maqnaanshaha dheer iyo xiriirka shaqaalaha. Iyadu sidoo kale waa xiriiriyaha koowaad ee maamulka qandaraaska, shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Haddii aad qabtid su'aalo ama walaac ku saabsan xaaladaha shaqada ama xaaladaha shaqada, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad marka hore la hadasho maamulahaaga. Tabashooyinka badankood waxaa xallin kara shaqaalaha ugu dhow dhibaatada. Haddii dhibaatadu sii socoto, la xiriir Robyn Klinker oo ka tirsan Shaqaalaha.
Ka eeg kaydka iyo bedelka bogga wixii macluumaad ah.
Deb Malmsten , 952-401-5029, waa xiriirka koowaad ee hawlgabkeenna. Waxaan sidoo kale ku casuumay hawlgabkeena inay sii wataan u adeegida caruurteena iyo bulshadeena sidii keyd ama badal. Kala xiriir Amy Hillstrom lambarka 952-401-5031 wixii ku saabsan fursadaha shaqo ahaan keyd ahaan.
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ma shaqaaleeyaan wadayaasha basaska dugsiga. Waxaan qandaraas kula jirnaa Ardayga Koowaad adeegyadayada gaadiidka. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan shaqada ama aad rabto inaad dalbato, fadlan la xiriir Ardayga Koowaad lambarka 952-470-5366.
Sandy Souba , 952-401-5008, waxay ku farxi doontaa inay ka jawaabto su'aalaha macalinka ama ay kaa caawiso inaad hesho macluumaadka aad u baahan tahay. Qalabka Sandy:
Shaqaalaynta qorista iyo shaqaalaynta shaqooyinka macallimiinta (iyadoo lala kaashanayo maamulayaasha)
Dukumiinti ku saabsan koritaanka xirfadeed iyo isbeddelka haadka ee macallimiinta
Macallin ayaa ka tagaya maqnaanshaha
Nidaamka Macluumaadka Shaqaalaha ee Macallinka
Taageerada liisamada cusub ee macalimiinta
Horumarinta Xirfadeed / Su'aalaha Qiimeynta Macallinka - kala xiriir Sara White telefoonka (952) 401-5103 ama emayl u soo dir sara.white@minnetonkaschools.org
Robyn Klinker , Isuduwaha Kheyraadka Shaqaalaha, 952-401-5016 wuxuu ku farxi doonaa inuu kaa caawiyo wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shaqaalaha. Waxay ka caawisaa Waaxdayada Teknolojiyada shaqo qorista, maqnaanshaha muddada dheer iyo xiriirka shaqaalaha. Iyadu sidoo kale waa xiriiriyaha koowaad ee maamulka qandaraaska, shaqo la'aanta iyo kaalmada shaqaalaha.
Kheyraadka Aadanaha /